व्यङ्ग्य : नामको पछाडि राज र पदको अगाडि राज = युवराज ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
व्यङ्ग्य : नामको पछाडि राज र पदको अगाडि राज = युवराज !
असोज १७, २०७७ शनिबार ८:५१:१६ | मिलन तिमिल्सिना
सत्य र अकाट्य कुरा यही हो । हुनुपर्ने र भैरहेको पनि यही हो । यति जान्दाजान्दै पनि तपाईं हामी महाराज र युवराजको आरिस गर्छौं । त्यसैत्यसै मुर्मुरिन्छौं । विरोध र आलोचना गर्छौं । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई च्यापे भनेर मुख अमिलो बनाउँछौं ।
युवराज चाहिँ यत्रतत्र सर्वत्र हुने, कुलमान चाहिँ बिजुली अड्डामा दोहोरिन किन नहुने भनेर हिरा र किरा दाँज्न खोज्छौंं ।
नामले त सबैतिर राजकाज गरेर भ्याउन लागे । नामपछि थरको पालो पनि आउला । थरमा वडा झुण्डिएको छ, खतिवडा । खति भनेको त नोक्सानी, क्षति पनि हो । केन्द्रीय तहका सबै ठाउँमा राज गरेर वडाको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्ने गए भने त्यसले के कस्तो खति गर्छ भन्नेतिर नलागौं । कामले भन्दा पनि नामले अद्भूत क्षमता भएका मान्छे भन्ने अर्थमा बुझौं ।
कुलमानलाई कुलले र जनजनले मानेको । यी मान्छे रहँदा बत्ती जाँदैन भनेर सबैले जानेको । तर नागरिकले मात्र मानेर र जानेर हुँदैन ।
त्यसमाथि कुलमानको ठाउँमा फेरि कुलमान त के युवराज पनि फिट हुन नसक्ने अवस्था भैसक्यो । कुलमान छोडेर हिँडेदेखि बिजुली बत्ती कुलमानसँगै आँखा झिम्क्याउन गएको छ । प्राधिकरणका मान्छे भन्छन्, मुसाले बिगारेर यस्तो भएको हो । भनेपछि मुसा मार्न सकियो भने मात्र बत्ती आइरहन्छ । मुसा मार्न न कुलमानले सक्छन्, न अर्को मान्छे या क्षमतावान युवराजले नै । मुसा मार्न त बिरालो चाहिन्छ । बिजुली अड्डाको कुनाकुना, पोलपोलमा म्याउ गर्न सक्नुपर्छ । सबैतिर फिट हुन सक्ने युवराजजस्तै बिजुली अड्डामा म्याउ गर्न सक्ने ह्याउ कसैको होला त ?